Uri kutsvaga steroid yakasimba yakakunda kuvimba kwevanachiremba here? Zvakanaka, methyltestosterone inofanira kuva sarudzo yako inotevera. Tsvaga zvikomborero zvekushandisa chirwere ichi, nhoroondo yaro muhurumende yekuvaka muviri uye nharaunda yezvechiremba, migumisiro, uye kuti ungatenga sei muyero.
Kuvaka muviri hakusi zvose nezvekunyoresa kumitambo yepamukati uye kuita maitiro akakura. Iwe unoda kuita zvinopfuura kungoshanda kunze. Mushure mezvose, unogona kurasikirwa nepfungwa nekukurudzira munzira, kunyanya kana zvigumisiro zvisingaoneki.
Muiti wega wega wega anotarisa kune ribbed physique nemisungo yakanatswa yakaonda. Kana uri kuenda kumakwikwi, utsinye hwako, simba, uye simba zvichaverenga. Mune pfungwa chaiyo, idzi dzinongova nheyo dzekubudirira kwako. Trenbolone Enanthate vs Trenbolone Acetate (Ndeupi Wins?)
Wakanyorovesa pane izvi here? Bata nokuti pane zvakawanda zvakachengeterwa iwe. Kunyangwe tine zvinangwa zvakasiyana, isu tose tinoda kuti simba remashiripiti kurwisa muvengi wedu. Munyaya iyi, haambotambudzi kuedza steroid semethyltestosterone. Kuti zvibatsire kukurudzira kushungurudzwa kwevashandi, ichi chinodhaka chinodarika vose vakwikwidzana.
Usati watora methyltestosterone, iva nechokwadi chokuti unzwisise nyaya ino.
1.Chii chinonzi Methyltestosterone? Chinoshanda sei?
Methyltestosterone iri pakati pezvikamu zvishomanana zvechikoro chevana anabolic steroids yekuvaka muviri. Iyo ikemikari inoumba iyo CAS kwete 58-18-4. Chibereko chacho chinonzi chirwere chakadikanwa chevarimi vemiti sezvavanoratidzwa uyerogenic uye anabolic maitiro.
Methyltestosterone inopayona mumuromo kuedza kuongororwa, iyo inobva ku testosterone. Chii chinoita kuti chidimbu chive chakasiyana nekubatanidzwa kweAlkylated C17-alpha molecule. Scientifically, kuwedzera kweboka re methyl kunovimbisa kuti mishonga inogona kurarama kuburikidza nekuputsika kwemagetsi uye kugadzirisa zviratidzo mumuviri.
MuMethyltestosterone boka re methyl rinotsanangurira 17th nzvimbo ye carbon atom. Izvi zvinoita kuti chidimbu chiwire mukirasi yeC-17 alpha-alkylated steroids. Zvisinei, nokuda Methyltestosterone bodybuilding, the anabolic zvinhu hazvionekwi sezvinoonekwa nedzimwe mazana C-17-aa.
Chibereko chacho uye androgenic uye anabolic ratings inenge ye100 yeboka rimwe nerimwe. Ichi 1: 1 chiyero chinopindirana neicho che testosterone.
Kunyange zvazvo testosterone iyi yepakutanga ichisiya chero mupi wemuviri ane masimba akaonda uye anoshanda zvakanaka, kushandiswa kwayo kunowanikwa pasi rose. Semuenzaniso, pharma grade yeMethyltestosterone ine zvekuwedzera mune zvehutano mukurapa kwepachifu remamese, menopausal therapy, uye kutungamirirwa kwehutachiona.
Kuvapo kweMethyltestosterone kunodzokera ku1935. Itero steroid yakavhura ivhu idzva rekushandiswa kwemuromo uyero androgens kwete chete mumakiriniro ekugadzirira asiwo muzinda wekuvaka muviri. Chikonzero chikuru chekusimbiswa kwechirwere chacho chaiva chekutora testosterone chaiyo muvarume apo maitiro ekupedzisira ainge akaderera kudarika nguva.
kunyange zvazvo Methyltestosterone inotengeswa yakanga iripo seine steroid isinganzwisisiki, Ciba Pharmaceuticals yakauya nemapiritsi emagetsi ayo aigona kuparara zvakananga kuburikidza nerurimi. Iyi mishonga yakanga iri hasha dzose pakati pe1950s uye 1990s ine zita, zita rinonzi Metandren Linguets.
Panzvimbo pokumedza Methyltestosterone mapiritsi, unogona kuisa mahwendefa eMetandren Linguets pasi peirimi uye kuvabvumira kuparara. Pamusoro pekudya, steroid inopararira kuburikidza ne mucosal membranes pasina kupfuura chiropa.
Kungofanana nedzimwewo steroid vanabolic, kushandiswa kwechirwere ichi kwakaramba kuchikakavadzana. Muhuwandu hwakave nenhau yakachena, nyika dzakawanda dzakarambidzwa uye dzakasvibiswa Methyltestosterone mutengesi kunze kwemisika yemishonga. Tora, somuenzaniso, munguva yekupedzisira ye80; iyo German Endocrine Society yakaunza kumisa kwekutengeserana kweMethyltestosterone kubva kumashamba eGermany.
Pakazoitika, vazhinji veEurope vakatevera zvakasungirwa uye vakarambidza izvi nekuda kweMehyltestosterone migumisiro yakadai sa hepatotoxicity. Mune dzimwe nyika dzeUnited States, mishonga inobvumirwa kune makiriniki nemishonga. Zvisinei, zvakaoma chaizvo kuzviwana sekumiswa kwega-oga kubva pakagadzirwa nemethyltestosterone iyo inogara ichisanganisa pamwe nezvimwe zvinoshandiswa.
MuUnited States, mishonga yacho inobvumirwa nemutemo chete pasi pemutemo wakakodzera. Masangano makuru emitambo anosanganisira International Olympic Committees akanganisa kushandiswa kwemethyltestosterone mumitambo. Iyo iri Purogiramu III uye IV zvinhu muUnited States neCanada, pamwe chete.
Iyo Methyltestosterone Inoshanda Sei?
Kuva sarfolk steroid alpha, Methyltestosterone inosunga kune androgen receptors (AR). Inoshanda se substrate ye-5α-reductase enzyme, saka, kuchinja mu 17α-methyl-dihydrotestosterone (mestanolone). Mushure mekunge kusungirirwa kumasero eA AR, steroid inotanga kunyorwa kwemajini uye androgen-responsive, izvo zvinokonzera kukura kukuru uye zvepabonde zvepabonde.
Kusiyana nedzimwewo zvakagadzirwa zve testosterone, methyl test ine nhamba yakaderera yevanabolic basa. Saka, iyobolic torogenic chiyero ishoma kuduku, zvichiita kuti steroid ive neyakakwirira uye androgenic.
Iko kunonyanya kunetseka kwemashyltestosterone bodybuilding steroid ndeyokuti inogadzirisa panguva yekuita kwechiito mumuviri. Iyo inogadziriswa ichienda kune imwe yakanyanya 17α-methyl estradiol inokonzera isrogenicity uye inotevera migumisiro yesrogenic inotevera sekuchengetwa kwemvura uye gynecomastia.
Product zita Methyltestosterone
Kemikari zita · 17A-methylandrost-4-en-17β-ol-3-imwe
Nhamba yakanyunguduka (° C) 161 - 166
Inofungidzirwa pfungwa yekubikira (° C) 383
Storage tembiricha Chengeta pane firiji yepamusoro (2 ° C - 20 ° C), kure nemhepo, unyoro, kana chiedza
Kuonekwa An odorless creamy white crystalline powder
Solubility · Mvura inokonzerwa ne34 g / mol pa 25 ° C
· Methyl doro
· Zvishoma nezvishoma zvinosanganiswa mumafuta emichero
Kirasi yemishonga Anabolic-androgenic steroid
Usage Kusimbisa muviri uye kuwedzera simba
Nzira dzeMethyltestosterone Administration
Pane mitatu yekushandisa methyltestosterone. Sezvo iripo mune fomu yepafabheti, nzira inowanzotaurwa ndeyomuromo. Iwe unogona kumedza mapiritsi kana kuisa pasi porurimi kana pakati pejaya uye mazino ezvinyorwa zvisinganzwisisiki uye zvinyorwa zvekutonga, maererano. Muchiitiko ichi, mushonga wacho uchapedza zvakananga pasina kupfuura nepamuviri wepamuviri.
Tora steroid kamwe kamwe pazuva kwemavhiki matatu panguva dzakaringana dzenguva. Zvinotarisirwa, ita nechokwadi kuti uchitungamirire pane chinenge chisina chinhu chokuwedzera bioavailability. Kutora methyl kuedza nechikafu kuchaita kuti iparadzwe nemafuta asingakoshi, saka, kuderedza kushandiswa kwayo kusvika kuropa.
The Methyltestosterone dosage inowedzera pane zvimwe zvinhu. Semuenzaniso, varume vachagara vachiine kukosha kwepamusoro kune dosing kupfuura vakadzi. Uyewo, nzira yekutungamira ichagadzirisa huwandu hweSteroid muiti wehupenyu huchatora. Kana ukasarudza mahwendefa emagetsi, chirwere chacho chichaderera pamusana pokukwirira.
Nechinangwa chekusimudzira muviri, tora miitiro yezuva nezuva pakati pe10mg uye 50 mg kwemavhiki akawanda e8. Zvisinei, varwere vanobata nekushayikwa kwe androgen vanogona kushandisa mishonga kwenguva yakareba sezvo migumisiro yacho isingakoshi. Zvinhu Zvose Zvaunoda Kuti Uzive nezvaAnavar (Oxandrolone) yeMuvhuro
Kana chinangwa chako kuwedzera kushanda, ipapo methyltestosterone haisi iwe. Rega ndikutsanangurire. Iine yakakura uyerogenic yakaipa, iyo inogona kunge isingafambi zvakanaka nehutachiona hwemadzimai. Nokudaro, hazvisi kukodzera kuisa pangozi iyo virilization madhara.
Zvinokurudzirwa kuti vakadzi vanoshandisa steroid chete pasi pechiremba chechiremba. Muzviitiko zvakawanda, maitiro akaderera se3mg achabata zviratidzo zvekuenda kumwedzi. Zvisinei, zuva nezuva methyltestosterone dosage inogona kukwira ku200mg kana ichirapa inoperable breast carcinomas.
Usati watora methyl test, iva nechokwadi chokuti uverenga kuburikidza neraira yezvinyorwa. Idzi ruzivo ruchakupa ruzivo rwokuti ungashandisa sei mushonga, zvinodzivirira kuchengetedza, uye izvo zvaunotarisira apo pairi.
Chimwe chinhu chinonyanya kukosha kucherechedza ndechokuti iwe unofanirwa kuve nechokwadi chekutungamirira methyltestosterone nguva dzese. Kana uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchitarisa zuva rega rega, tora iwo pakarepo kana pfungwa yacho ichikurova. Kana iri munzira yakapfuura, tambai iwe usina kukanganisa uye ramba uchiita nemirairo yako yakajairika.
Ichi chiremba chinoshanda kune varume nevakadzi. Zvisinei, vakadzi vanofanira kushandisa miviri yakaderera sezvinobvira.
Methyl Test inogona kuyanana nemishonga yakawanda, zvokudya zvinowedzera, mishonga yemishonga, uye mamwe mishonga isiri mishonga. Izvo zvakanyorwa zvinosanganisira chirongwa cheshuga chega, ropa rakakosha se warfarin, uye oxyphenbutazone.
Vakadzi vane pamuviri uye vanoyamwisa havafaniri kutora methyltestosterone. Kunyangwe iwe ukava nepamuviri apo uri pamushonga, unofanira kufunga kubvisa chiremba. Zvidzidzo zvakaitwa pamakumbo ane pamuviri zvinotsigira kuti steroid inokonzera kuberekwa kwekuremara, fetus masculinization, nezvimwe zvinokanganisa fetus.
Kuvana nevechiri kuyaruka, kushandiswa kwemashyl ​​test kunogona kupindira nekutema mafupa.
Mamwe mapoka anofanirwa kuvhara steroid ndivo vanorwara nekenza, vanhu vane mwoyo yemamiriro, uye avo vane zvirwere zveropa. Kunyange zvazvo ine nhoroondo yekugadzirisa nekurapa makondomu ezere, zvakakosha kuti uve nechirwere chechiremba.
Zvakanaka, kana iwe uri mutambi anoshingaira, steroid inogona kuva ndiyo nzira chete yekuwedzera kushanda kwako nekuwedzera simba rako. Zvisinei, iwe unofanira kutarisa sezvo masangano emitambo achange achikuvhima pasi. Iwe hapana mubvunzo uchaputsa zvinyorwa zvenyika, asi zviremera zvichakubvisa mishonga yako uye kukurambidza iwe kubatanidzwa mumitambo.
3. Methyltestosterone Purogiramu
Chimwe chinonzi methyltestosterone rinopera pakati pevhiki nhanhatu. Izvo zvinodiwa mumuromo wepayenzi 40 - 50mg. Zvisinei, izvi hazvirevi kuti chero chinhu chipi nechipi chinotarisirwa pasi apa uwandu huchiri kubudirira. Kusiyana naizvozvo, iwe uchaona humwe huri nani hunovandudzwa nehuwandu hwemigumisiro.
Kana iwe uchizoshandisa chimiro chebumbiro, iva nechokwadi chekuderedza dhigiri kusvika ku50%. Iwe unofanirwa kudonha pamutengo nokuti iyi nzira yekutungamirira ine bhao-refujiko yakakwirira ichienzaniswa nehuwandu hwemuromo.
Pakuguma kwe methyltestosterone Cycle, wega wekudyarwa kwe testosterone hormone inogona kuparara. Muchiitiko ichi, shandurai kumushonga wepasipoteri kuti uchengete mazinga avo.
Nemhaka yehafu yenguva-hupenyu, methyltestosterone ichasvika pakakwirira uye inopinda ropa mukati meawa. Kana mudzidzisi anoshingaira achitora steroid nguva pfupi musati mutsva, angadai akawana simba guru, utsinye, uye simba kukwikwidza.
Mu methyltestosterone bulking chikamu, kuchinja kunowedzera zvishoma uye kusingaoneki. Kunze kwekuti iwe ukaita chimwe chekugadzirisa zvakasimba, iwe unogona kusakwanisa kuwana masimba anokanganisa iwe wave uchirota.
Chimwe chinonzi methyltestosterone hafu yehupenyu chiri mumakero e2.5 kusvika kumaawa 3.5. Pamusoro pezvose, izvi ndezvemaawa 3.
Mushure mokunge mubairo wekupedzisira, methyltestosterone uye metabolite yayo ichagara mumuviri kwevhiki vasati vapera zvachose. Munguva yekuongorora, kusvika ku90% yaro ichave iri mumuginho apo vamwe vose vacharatidza mumasese.
Nekufambira mberi kwekombiki yepamusoro, iwe ucharamba uchiona maratiro e steroid mavhiki mana kusvika matanhatu mushure mekuregera. Zvisinei, izvi zvinogona kunge zvichitarisira kana mushandisi akatora furosemide kana phenobarbital kuti ikurumidze kubuda kwemashyl ​​test.
Kune avo vari kutengesa, kusanganisira methyltestosterone muhurumende yenyu pasina mubvunzo kunotungamirira kumigumisiro yakanaka. Steroid ine zvishoma vanaboliclic effects. Nokudaro, kuwedzera pfuma hazvirevi zvakanyanya uye zvichazoitika zvisingaoneki.
Muzvokwadi, iyo inoratidzika kuwedzera kuwanda nguva dzose inokonzerwa nekuchengetwa kwemvura. Kunosvika kumagumo ekugadzirisa methyltestosterone phase, kuchava nehupamhi hwemvura yakanyanyisa sezvo mubhiiyo anonyora kurasikirwa kwemuviri.
7. Methyltestosterone yeBucking
Methyltestosterone kuti uwane kuwanda pane imwe yega ingasakupa iwe musimba hwakakwana iwe wave uchida. Muchidimbu, chero zviyero zvaunenge wawana zvakakonzerwa nehupamhi hwekuchengetedza mvura uye kuwedzera kwemvura. Kana ukangopedzisa mhirizhonga, iva nechokwadi kuti uende kuburikidza nehupenyu hwemashure ekurapa kuti uchengetedze muviri uyu.
Kuti uve wakachengeteka, edza steroid stacking. Muchikamu chekuderedza, shandisa madhiragi akadai Dianabol, Decanoate, kana Trenbolone.
8. Methyltestosterone Makomborero
1) Kuwedzera muKuita
Itero steroid inobata nekudzivisa basa rekuita uye kukurudzira anabolism. Ichi chiito, zvakare, chinowedzera kushanda, kunowedzera simba rose, uye kunowedzera psyche. Kune vashandi vemasvingo, powerlifters, nemasikirwo emitambo anoshingaira, idzi methyltestosterone dzinobatsira zvinowedzera. Mushandisi anotanga kuita zvakadzidziswa kudzidzisa nesimba rakawandisa uye simba rakasimba risina kupera kunze.
2) Inowedzera Aggressiveness
Iwe unoda kuva munhu akaoma munharaunda here? Zvakanaka, methyltestosterone ichaita. Vose vanobatanidzwa mumitambo yekurwisana vanoda kutsvaga kukanganisa kwavo, simba, uye kutarisa panguva yemutambo.
3) Inowedzera Musisi Misa
Kunyangwe iwe usingakwanisi kuwana miviri yakawanda, iwe unogona kunge uine bhanhire pamushonga wekutengesa kutanga methyltestosterone bulking cycle. Iwe unofanirwa kuona kuti kuwedzera kwekukura kwemuviri nguva dzose kunokonzerwa nekurema kwemvura sezvo hormone inogadzirisa.
4) Kutsanya-Kuita Steroid
Ne methyltestosterone, iwe uchanzwa kuchinja kwechirwere, kwete kweawa imwe mushure mokutora. Iko kuchinja kunoonekwa mune nick ye nguva nokuda kwechikonzero chimwe. Steroid ine hafu yeupenyu hushoma. Nokudaro, ichasvika pakakwirira kwaro kuverengwa kwevatatu.
Kuvapo kweboka re methyl muchivako che methyltestosterone kunowedzera huwandu hwehupenyu hune huwandu hunenge huri pakati pematanhatu nemasere. Nokuti chero bedzi iwe uchichengetedza huwandu hwehuwandu hwechirwere muropa, iwe uchawana simba rakasimba uye rakanakisisa kushanda.
Mishonga inogara kwenguva yakareba mumuviri kana iwe uchiitora kuburikidza nehutungamiri hwehutano kupfuura apo iwe unomedza tablet. Iyi pfuma inoitika nekuti inopinda muhutano hwehutachiona zvakananga kuburikidza nekudya kunze kwekupfuura nechiropa.
6) Inosimudzira Maitiro eTesttosterone
Kana chigadzirwa chechisiki che testosterone chiri pasi, nguva dzose chinokurudzirwa kushandisa methyltestosterone. Chirwere ichi chinobatsira kuvarume vane zvose zvechipiri uye zvepakutanga hypogonadism zvakadai sekupererwa kwe testicular nekushayikwa kwegonadotropin-kurega mahomoni (GnRH). Mimwe mitemo inosanganisira kukuvadza kweputiitary hypothalamic, tescended testicles, uye kusavapo kwezvisikwa zvehupenyu zvinogumira.
Tichifunga kuti iyo yakasvibiswa ye testosterone hormone, methyltestosterone ichaita nenzira imwechete uye inokurudzira murume wechipiri zvepabonde maitiro.
7) Methyltestosterone Kubatanidzwa
Methyl test haisi yakasimba zvikuru, zvichida nekuda kwechikamu chechidiki chevanabolic kune mabasa androgenic. Heano mamwe mashoko akanaka, zvakadaro. Paunokwanisa kuisa pamwe neine steroid ine simba, mikana ndeyokuti iwe unonyorera mukati megirazi.
Semuenzaniso, kana iwe uri mukudengenyeka, musanganiswa we methyltestosterone na Dianabol, Nandrolone, Trenbolone, kana Decanoate vachaita. Kune rumwe rutivi, steroid iyi ichachengetedza zvakanaka ne stanozolol apo zvose zvaunoda zvinowedzera simba rako.
8) Chirwere cheKenza Kurapa
Methyltestosterone yakaratidza kuti inoshanda pakuchengetedza makondomu ezvipfuva akatozopararira kune mamwe maviri muvakadzi. Sezvo rudzi urwu rwemarara ari hormone-sensitive, ichadzoka zvakare. Mamwe makumbo anokonzerwa nemaitiro akadaro ndeye endometrium, mamwe eukemia, lymphomas, uye kenza yeprostate.
Kunze kwekuti, chirwere chacho chinodzivirira kurwadziwa kwepamu mushure mepamu. Kusiyana Kwakaipisisa Pakati Pekuedzwa Kuyananisira uye Kuedzwa Tsitsi
9) Kutarisa Manopausal Symptoms
Kutanga kwekuenda kumwedzi kunoguma muhutano hwehutano hwe androgen muvakadzi. Kunonoka mune iyi hormone kunokonzera kusagadzikana kwepabonde, kuderera mu libido, kupisa kunopisa, uye zviratidzo zvakabatana.
Zvidzidzo zvinoratidza kuti kubata mamiriro ekuma postmenopausal neMethyl Test inoshanda. Pamusoro pokukwikwidza, vakadzi vanogona kutora madhoma emishonga yemishonga pasina kuve nemigumisiro yakaipa.
10) Kurapa Kurambidzwa Kuberekwa
Muchiitiko chekupedzisira-kutanga kwekuyaruka, methyltestosterone inogona kuva ndiyo chete yakasarudzwa yakakodzera yekukurudzira kuita zvepabonde zvechipiri. Iyi nhanho inoshandiswa apo munhu anenge apomerwa haaiti zvakanaka kupindura kurapwa kwepfungwa.
Vanachiremba vaizogara vachironga mushonga uyu kusvika kumwedzi mitanhatu.
11) Pakutanga Male Testosterone Hormone
Kunyange zvazvo yakagadzirwa uye 100% inoita maitiro, methyltestosterone ndiyo yakachena muenzaniso wevarume uyerogen. Izvo zvinoshandiswa kuita chiito zvakafanana neya testosterone. Tora, somuenzaniso; iyo mishonga ichasunga kumasero e-receptor pasina muviri unoziva kuti hormone iri kunze. Kusiyanisa, methyl test ichaita sokunge iine endogenous androgen.
Kupfuura 90% yemethyltestosterone kuongorora kunopupurira kuti steroid inoshanda. Kuvaka muviri, mumwe achatanga kuona kuwedzera kwechisimba nesimba. Ukuwo rumwe rutivi, varwere vane hypogonadism uye vaduku vemu testosterone vakaratidza kuchinja kukuru.
100% yevashandisi vose vakabvumirana kuti methyltestosterone iri nyore kushandisa nekushandisa. Hakuna dambudziko rakaoma kana injini inorwadza. Kunze kwekuti, kutora mishonga kamwe chete pazuva ndeyekuwedzera kune vakawanda vanofarira kukanganwa mitemo yavo nekuda kwezvipikirwa zvakasiyana-siyana.
Mushure mokunge wakwana zvakakwana, hafu yevashandi ve methyltestosterone vanogutsikana. Munhu wose akasarudza kurega chirwere chacho aiva nezvikonzero zviviri zvakakosha. Semuenzaniso, vanhu vakanga vane ruzivo rudiki rwekugadzirisa mararamiro avo vasati vamboitika. Nokudaro, mhando dzisina kunaka dzakanyanya kudarika methyltestosterone inobatsira. Vaviri, vamwe vaifunga kuti mamwe maitiro steroid akashanda zviri nani pane methyltestosterone.
Kurwara Zvimwe Zvikamu!
Kutsigira pa methyltestosterone kuongorora, inenge inoshandiswa nemushandisi wega wega wehutachiona. Chakavanzika chechokwadi chekupfuura nemigumisiro yemigumisiro ndechokutora kuderedza madhesi, kuchengetedza nguva shomanana kushandiswa, uye kuita zvishoma maitiro. Mamwe emigumisiro yakaipa inosanganisira;
Oily ganda uye acne
Kuwedzera kukura kwemvere
Kudzingwa kwe testosterone
Mwoyo mamiriro ezvinhu
Methyltestosterone madhara enda apo iwe unomira uchiitora. Zvisinei, kuwedzera kwevakadzi kunogona kukutevera kuguva rako.
Nzira Yokudzivisa Methyltestosterone Side Effects
Tora kuderedza doses re steroid nekudzivirira urefu hwemukati kusvika mavhiki masere kuti usanyanya kuderedza chiropa
Tora methyltestosterone pamwe chete ne5α-reductase inhibitors yakadai sefinasteride, dutasteride, kana michina yakafanana, iyo inokonesa migumisiro ye dihydrotestosterone.
Kana kamwe chete mishonga ichichinja kuDHT, inotungamirira kumatambudziko eprostate uye kurasikirwa kwebvudzi.
Shandisa aromatase inhibitors yakadai seTamoxifen, Nolvadex, kana Arimidex kuti inopesana nemagumisiro eesrogenic
Rambai chiremba iwe paunosangana nemigumisiro yakaipa
Shandisa chiropa cheropa chinonzi Liv-52 kana Liver Stabil kudzivirira nhengo kubva pamigumo inogona kuitika
Kuti uderedze utano hwemwoyo, ita urongwa hunoshingaira hwekurovedza muviri paunenge uchidzivisa mafuta akazara, mahydrohydrates, uye cholesterol. Kunze kwekuti, unogona kuwedzera kudya kwako nehove mafuta uye antioxidant.
Mushure mekunge mazadza purogiramu, iwe unofanirwa kuita PCT protocol kukanganisa kutanga kutanga kwekupedzisira kwetrosterone hormone.
Tora mvura yakawanda uchidzivisa zvinwiwa zvinodhakwa
10. Methyltestosterone Kutengeswa
Sezvo kushandiswa kwemethyl kuenzanisa hakusi mhirizhonga zvachose, iwe hausi kuzowira kune zvigadzirwa zvemhando. Kana iwe une mvumo yemutemo kubva kunechiremba, kuwana steroid zvakajeka sekutengesa kune rimwe sneakers. Iwe unogona Tenga Methyltestosterone powder kana kutenga chigadzirira-kushandiswa sarudzo yekutsvakurudza, zvinangwa zvekuvaka muviri, kana kushandiswa kwerapa.
Mune mamiriro ezvinhu apo iwe hauna mazano ekuchiremba, choga chisarudzo ndechekuwira kumusika mutema uye pasi mabhii. Zvakanaka, havasi vose vane fakes! Iwe unogona kutengesa zvakapoteredza pazvitoro zvayo sezvi Buyaas nokuda kwehutano uye zvisingakwanisi steroids.
Kune mabhizimusi eIndaneti, methyltestosterone inotengeswa inodhura, yakatendeseka, uye iwe unogona kushanda pasina kuenzanisa mutengo pakati pevatengesi vakasiyana.
11. Methyltestosterone Vs Testosterone ye Bodybuilding
Methyltestosterone inonyanya uye androgen, iyo inenge yakafanana neyestosterone isingagumi. Kunyange zvazvo yekare yakagadziriswa, zvose zviri zviviri zvine nzira yakadaro yekuita kumwero uyo muviri haugoni kuudza kusiyana. Kunze kune testosterone chaiyo, pane zvimwe zvakadai seTest Propionate kana Cypionate, kushanda nenzira imwechete.
Methyltest inonyanya kufanana nehutachiona kana ichienzaniswa ne testosterone pamusana pekuwedzera kweboka re methyl muchimiro chayo. Zvisinei, zvose steroid inogona kubata nekupera kwekubera, hypogonadism, kurwadziwa kwepamu mushure mekuberekwa uye kuputika, kenza yemazamu, uye mawere asina kufanira.
Ivo ndeveboka revanabolic-androgenic steroids
Vanowedzera kushanda, simba, uye musimba mashoma mumadzimba emumuviri, masimba emitambo anoshanda, uye powerlifters
Vane mishonga yemishonga mukurapa hypogonadism uye pasi mashoma e testosterone
Mutengo per unit Zvishoma zvishoma kunze kwekuti iwe utenge methyltestosterone yakawanda Zvakananga zvishoma
Nzira yekutungamirira Chirevo, chirevo, uye zvinyorwa zvinyorwa Inowanikwa se transdermal gel uye mhinduro
Mvumo yepamutemo 1972 1953
mamiriro Kune boka re methyl pa17th nzvimbo ye carbon atom Hapana methyl mune zvayo
Methyltestosterone iri pakati pevasrogenic steroid vashoma pamwe nemigumisiro yekurapa uye yekuvaka muviri. Zvichida, mushonga wacho unowanikwa nyore nyore uye unovimbwa sezvo mamwe maitiro akanyoresa kushandiswa kwawo mumakiriniki ekugadzirira.
Kunyange zvazvo nyaya yacho isingakukurudziri kunyatsochengeteka paunoshandisa methyl test, inokupa rundown pane zvaunotarisira paunenge uchitora. Kubva pane ruzivo, iwe unogona kuongorora njodzi uye kuenzana navo nezvipo. Kana zvakakosha, ipapo iwe wakanaka atenga methyltestosterone paIndaneti.
Mishonga yose ine zvigumisiro zvayo. Nokudaro, chinhu chimwe chete chakavanzika chokufadzwa nemigumisiro ndechokutarisira matanho aya. Kana iwe waverenga nyaya yacho, iwe uchanzwisisa zvishoma zvishoma.
Uri kutarisira chikamu here? Tarisa mukati nemasikirititi anonzi methyltestosterone akadai akadai Buyaas.